Siinga-Siingaha iyo Muslimiinta
Tan iyo intii ay dhacday Sep.11 waxaa dhibaatooyin iska daba imanayey loo geysanayey dadka Siinga-Siingaha loo yaqaano dalka Maraykanka. Sababta loo dhibayo dadkaas ayaa ah iyagoo u eg Muslimiinta. Gadhka oo ay la baxaan iyo madaxa oo ay duubtaan ayaa u horseeday in la dilo, la dhaco, loona geysto aflagaado markay dariiqyada marayaan.
Dhibaatooyinka dadka Siingaha loo gaysanayo waxaa ugu danbeeyey markii nin cadaan ahi rasaas ku furay meel ay ku cibaadaystaan Siinguhu oo ku taala gobolka Wisconsin, halkaasoo ay ku dhinteen 6 Siinge ah tira kalena ku dhaawacmeen. Ninkaa toogashada gaystay ayaa ku qaylinayey "Muslimoow Dhimo" isagoo u haystay inuu Muslimiin dilayo.
Siinga-Siingaha ayaa kor u qaaday codkooda iyagoo meel walba ka sheegay inaanay Muslim ahayn, sidaa darteedna aan loo dili karin Muslim ahaan. Waxay sameeyeen xayaysiis badan oo arintaas ay ku muujinayaan, iyagoo telifishanada, wargeysyada, iyo internetkaba ku faafiyey inaanay Muslim ahayn. Laakiin ilaa hadda sheegashadoodu ma shaqayn, dadka Maraykanka ihina markay Siinge arkaan wuxuu u yahay Muslim.
"Waa isku mid, bal eega maxay ku kala duwan yihiin? Gadhka iyo madaxaba waa isaga eg yihiin, anigu rumaysan maayo inay kala diin yihiin waayo isku wax ayay aaminsan yihiin isku waddana waa degan yihiin" ayuu yiri Mark Jonathan oo 26 jir ah isagoo kor hayey sawirka hogaamiyaha Iiraan Ali Khomeyni iyo nin Siinge ah.
Muslimiin Badan badan ayaa qaba dilka Siinguhu inuu yahay gargaar ilaahay Muslimiinta la doonay, laguna furtay oo lagu bedelay Siingaha halkii Muslimiin laga dili lahaa. Hadaba maxay ku kala duwan yihiin Siingaha iyo Muslimiintu? Waa arinta ay meel walba ku sharaxayaan Siinguhu si ay isaga fogeeyaan Muslimiinta.
Siinguhu waxay caabudaan Waheguru waxaana diinta Siingaha bilaabay nin la oran jirey Guru sanadkii 1469 gobolka Punjab waana diinta ugu da' da yar diimaha dunida, waxaana khasab ah in ninku gadhka iyo timaha la baxo, madaxna duubto.
Balqiis Bint Jacfar AlMakhzuumi